Uyenza kanjani iAventure yoTyelelo nokuba luHlahlo-lwabiwo mali ngakumbi | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > Uyenza kanjani iAventure yoTyelelo nokuba luHlahlo-lwabiwo mali ngakumbi
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/10/2020)
Ukuhamba ngololiwe ngamava amnandi anika inqwaba yemivuzo. Oololiwe bakusondeza kumbonakalo yomhlaba: ngekhe ubone umhlambi weegusha usitya okanye uphefumla ngevumba lenkundla yeetulip ukusuka kwisihlalo esiphakathi seAirbus. Oololiwe banokukuqhubela emaphethelweni yaye ndikubeke embindini wesixeko akukho xesha. Unokolula kwaye uphumle kwaye uncokole ukusuka kwi umgama ofanelekileyo nabanye abahambi xa ukhwela uloliwe. Abanye bangathi ukuhamba ngololiwe ngumvuzo wakhe kuba ngalo lonke ixesha sikhwela uloliwe, sinceda ukugcina ishishini elibalulekileyo kunye nesiko elidlamkileyo. Kodwa namhlanje silapha ukuze sithethe ngolunye uhlobo lomvuzo-onokukunceda thatha ngaphezulu uloliwe kwaye ubone ububanzi obubanzi behlabathi okanye indlela yokwenza uloliwe olumnandi nangakumbi kuhlahlo-lwabiwo mali. Luhlobo lwemivuzo ekhutshwe ziinkampani zekhadi lokuthenga ngetyala. Kwaye ukubaqokelela kunokuba sisicwangciso esiliqili sokuxhasa ngemali iiholide ophupha ukuzithatha.
1. Uyenza kanjani iAventure yoTyelelo nokuba luHlahlo-lwabiwo mali ngakumbi: Amakhadi okuthenga ngetyala ahlukile
Abantu bahlala begcina amakhadi etyala emveli kwizipaji zabo ngenxa yezizathu ezimbalwa. Maxa wambi siye siphathe ikhadi lokuthenga ngetyala kuba nje sifuna ukuphepha ukuba nemali eninzi ezipokothweni — nto leyo enokuba yingozi, ngakumbi xa sihamba. Amakhadi etyala nawo asinceda ukuhlawulela izinto esingakwaziyo ukuhlawula zonke ngexesha elinye, nokuba ziyimfuneko okanye zilungile. Ukuziqhelanisa kokuqala yindlela efanelekileyo yokusebenzisa ikhredithi yokuhamba. Inyaniso, Eyona ndlela yokufumana umvuzo kwikhadi lakho letyala lokuhamba kukusebenzisa rhoqo, ngakumbi ukuthengwa okukhulu. Kodwa indlela yesibini enokuba yingozi xa usebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala. Ngoba? ngenxa, Ngelixa i Umyinge wenzala ophakathi ohlawulwa ngumzi-mveliso wekhadi letyala xa iyonke-kwaye unokufumana ezininzi ezibiza kancinci-kunjalo 14.52%, amanye amakhadi etyala okuhamba abiza ngaphezulu 25%. Kwaye abaninzi babiza imali eninzi yonyaka ngaphezulu kwayo. Ukuthwala ibhalansi ephezulu kwikhadi lokuthenga ngetyala kuya kuhlawula ityala lakho ngokukhawuleza. Ke umgaqo wokuqala wokusebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala awusoze uhlawule ngaphezulu kunokuba unokuhlawula kumjikelo wokuhlawula.
2. Izibonelelo zokusebenzisa iKhadi letyala lokuHamba
Iinkampani zamakhadi okuhamba ngetyala zixhalabile ukuba neshishini lakho. Bakhuphisana nezinye iinkampani ukuze bayifumane. Ukunikezela ngenkqubo yomvuzo owahlukileyo kunye noqinileyo yeyona ndlela iphambili abazahlula ngayo kwindawo yentengiso kunye nokutsala abathengi.
Iiperks ziqhuba i-gamut. Ezinye iinkampani zikuvuza ngeemayile ezihamba rhoqo zeeflaya. Masithi ungumntu waseNew York ocwangcisa ukhenketho lokungcamla eBordeaux, Inxalenye yokuqala yohambo lwakho yinqwelomoya eya eParis-ekunokwenzeka ukuba yeyona ndleko inkulu kuhambo lwakho. (Ngaphandle kokuba ungcamla ezinye izinto ezinqabileyo ezinqabileyo!) Ukuhamba rhoqo kweemayile ozifumanayo kungakuthengela itikiti lenqwelomoya. Ezinye iinkampani zamakhadi okuthenga ngetyala zibandakanya amatikiti amaqabane ngonyaka njengenxalenye yesakhiwo somvuzo, ukuze uze nomhlobo kwi-adventure. Ezinye iinkampani zibonelela ngemivuzo enokwenza ukuba uhambo lwakho lube mnandi ngakumbi, ukusuka ekuphuculweni kweklasi yokuqala ukuya kufikelela kuphela kwiindawo zokuphumla zeenqwelomoya kwizikhululo zeenqwelomoya kwihlabathi liphela. Izaphulelo kwiihotele nakwiivenkile zokutyela zikwakhokelela kulwakhiwo lomvuzo wamakhadi etyala.
3. Uyenza kanjani iAventure yoTyelelo nokuba luHlahlo-lwabiwo mali ngakumbi: Ukhetho lwethu lweePerks
Eyona nto ibhetyebhetye onokuyifumana kukubuyisa imali ekuthengeni kwakho. the amakhadi etyala ahamba phambili hlawula 2% buyela kuzo zonke izinto ozithengileyo. Abanye bonyusa ipesenti yokubuyisa imali ukuya kuthi ga ngoku 6% kwiindidi ezikhethiweyo, kubandakanya indiza, yokutyela, kunye nokuthengwa kweehotele. Ukuba usebenzisa ikhadi lakho lokuthenga ngetyala rhoqo-nokuba ubhatalela izinto zemihla ngemihla ezinje ngegrosari kunye negesi-imbuyekezo yemali inokongeza ngokukhawuleza kwaye isetyenziselwe ukucima naziphi na iindleko zokuhamba ozithandayo, kubandakanya ipasi yakho elandelayo yoololiwe. Kodwa kwakhona, kusengqiqweni ukusebenzisa ikhadi lakho letyala ngale ndlela ukuba ulungele ukuhlawula ibhalansi yakho inyanga nenyanga.
4. Iingcebiso zokukhetha iKhadi letyala
Amakhadi okuthenga ngetyala ahlala ehamba esebenzisa uhlobo oluthile lwenqaku ukubala umvuzo owufumanayo kwaye ezi nkqubo zihlala zintsokothile. Ukwengeza, amanye amakhadi anyanzelisa ubuncinci bokuthenga ngaphambi kokuba ufumane amanqaku kuwo onke. Umzekelo, unokucelwa ukuba wenze ifayile ye- $1000 okanye ngaphezulu ekuthengeni ngaphezulu kwenyanga ezintathu ngaphambi kokuba uqale ukufumana amanqaku. Ukubeka itikiti lenqwelomoya kwikhadi lakho lokuthenga ngetyala yindlela elula yokuhlangabezana nobuncinci. Kodwa unokuhlangabezana nayo usebenzisa ikhadi lakho iinyanga ezimbalwa ukuhlawulela iindleko zemihla ngemihla. Qiniseka ukuba ugcina umkhondo wentengo yakho yokuthenga ukuze uqiniseke ukuba usendleleni inyanga nenyanga ukufikelela kwinjongo yakho yenkcitho.
Eyona nto ukubheja kwakho kukuthelekisa ngalinye lamakhadi olithathela ingqalelo ii-apile. Unokufuna ukwenza ispredishithi ngale njongo ukuze uqiniseke ukuba ubamba zonke izinto zekhadi ngalinye kwaye uthelekisa ngokufanelekileyo. Qiniseka ukuba ubandakanya inzala ye-APR, Ubuncinci beemfuno zokuthenga, Ipesenti ebuyisa imali, kunye nemirhumo yonyaka yokuhlawuliswa kwekhadi lakho kubalo.
5. Uyenza kanjani iAventure yoTyelelo nokuba luHlahlo-lwabiwo mali ngakumbi: Ingcebiso enye yokugqibela
I-Wanderlust inokuba ngumnqweno ongenakuphikiswa. Njengeengcali zohambo, Siyakubongoza ukuba usebenzise ityala ngokufanelekileyo. kwakhona, sikucela ukuba uluthathele ingqalelo uxanduva lwakho kwiplanethi. Ukwenza ukhetho lokuhamba olunefuthe lokusingqongileyo, njenge ehamba ngololiwe endaweni yemoto ukukhangela indawo yakho elandelayo, yenye yeendlela zokuhamba ngelixa unyanisekile kwimigaqo yozinzo.
Apha Gcina A Isitimela, we will be happy to help you plan your vacation in Europe by train.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog "Indlela Yokwenza A Train Uloliwe Ngakumbi Budget-Friendly" kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / pl ukuba / fr okanye / de kwiilwimi ezininzi.
USusan Doktor yintatheli kunye neqhinga loshishino elivela kwisixeko saseNew York kwaye lihambe ngokubanzi ngololiwe. Ubhala ngoluhlu olubanzi lwezihloko, kubandakanya ezemali, zokuhamba, nokutya newayini. Follow her on Twitter @branddoktor or you can click here to Qhagamshelana nam